ကုန်းအော်နေတဲ့ ဘုန်းကျော်အတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ကုန်းအော်နေတဲ့ ဘုန်းကျော်အတွက်
တကယ်ဆို ဒီလို စာမျိုးက ပို့စ်အနေနဲ့ မဖြစ်သင့်ပါပဲ … ပါဆယ်နယ်လ်မေးလ်ကနေတင့်ပို့သင့်ပေမယ့် …. ကျွန်မအပါဝင် ၊ တပ်အားသရွှေ့အင်တိုက်အားတိုက် ကူညီနေကြတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို လူသိရှင်ကြား အယုံကြည်ပျက် ၊ သဒါ္ဓပျက်အောင် ရေးလာတဲ့ ကိုဘုန်းကျော်ရဲ့စာကြောင့် ပို့စ်တပုဒ်နေနဲ့ တင်ဖြစ်သွားတာပါ ။
တလောက အိတုံက ဦးဆောင်ပြီး ဂေဇတ်စုပေါင်းအလှူ လုပ်မယ်လို ့ပြောတော့ သာဓုခေါ်ရမယ်လို ့ဆိုချင်တယ်။ ပြီးရင် နာရေးကူညီမှူအသင်းကိုလှူမယ်ပေါ့။ အိုင်ဒီယာကောင်းပါတယ်။ ကျနော်လည်း လှူ ပါ့မယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက လှူတဲ့သူတွေကလှူပြီး ပိုက်ဆံတွေကို ဘတ် သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ယုံကြည်အောင် ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ထားကြလဲမသိဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ခဏခဏ အလိမ်ခံနေရတာဆိုတော့ လှူတော့လှူချင်တယ် ဒါပေမဲ့ မယုံရဲဘူးဖြစ်နေလို ့ပါ။ ဆိုတော့ လှူတဲ့သူတွေ ယုံကြည်အောင် ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားကြလဲဆိုတာ ပြောစေချင်တယ်)))
အထက်ပါစာပိုဒ်ထဲက စာကြောင် းအချို့က ကျွန်မအပါဝင် ၊ ကူညီလုပ်ကိုင်နေသူအားလုံးရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ၊ သိက္ခာတို့ကိုပါ တိုက်ရိုက်စော်ကားခြင်းလို့ မြင်မိပါတယ် ။ လှူသွားတဲ့အလှူရှင်တွေကိုလည်း ယုံမှားလွယ်သူတွေအဖြစ် သွယ်ဝိုက်ပြောဆို နှိမ့်ချထားတဲ့သဘောမျိုးလည်း ပါဝင်နေပါတယ် ။ မိမိက လှူချင်သယောင်ယောင်နှင့် မိမိငွေကို သဒါ္ဓမပြတ် တပ်မက်သောအရေးသားများလည်း ပါနေပါတယ် ။ မြန်မာပြည်မှာ ခဏခဏအလိမ်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ စကားကလည်း မြန်မာလူမျိုးအများစုက လူလိမ်တွေပါလို့ ထုတ်ဖော်မပြောရုံသာ အကျိုးသက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာ … စာရေးဆရာတွေ ငပျင်းတွေ လို့ ပြောဖူးတဲ့ စာရေးသား ကျွမ်းကျင်စွာရေးသားနိုင်သော ကိုဘုန်းကျော်တစ်ယောက် သေချာသိပါလိမ်မယ် ။
လူတိုင်း လူတိုင်း ရှင်သန်ပေါက်ဖွားရာနေရာမတူညီကြလို့ ပြုမူပြောဆိုပုံတွေ မတူညီကြတာ အပြည့်ဝနားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဆိုတာကတော့ လူတိုင်းမှာ မရှိတတ်တာ ကိုယ်တွေ့ကြုံမှ နားလည်သွားတယ် ။
((( ခင်ဗျားတို ့အဖွဲ ့ထဲမှာ လူလေးစားတဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ လူတစ်ဦးဦးကို နာယကလို ဦးဆောင်သူလ ိုထည့်ထား။ ဥပမာ အဆိုတော်လေးဖြူက နာယကပါဆိုပြီးလုပ်ပေါ့။ ဥပမာ လူထု ဦးစိန်ဝင်း။ အိတုံက နာမည်ကြီး လူလေးစားရတဲ့လူမှ မဟုတ်တော့ ဘယ်သူက ယုံမှာတုန်း )))
ကိုဘုန်းကျော်ရဲ့စာအသွားအလာအရ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းပြီး ….. နာမည်ကြီး လူတွေရဲ့ အရှိန်ဝါအောက် ခိုလှုံချင်ပုံရတယ် ။ ကိုယ့်သမိုင်းနဲ့ကိုယ်ပါ… လူတကိုယ်စိတ်တမျိုးဆီပေါ့ … ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို ့အဖွဲ့ကတော့ နာမည်ကြီးဘယ်သူ့ရဲ့ အရှိန်ဝါကိုမှ မသုံးပဲ ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ် ရိုးရိုးသားသား အလှူခံပါမယ် ။ အလှူငွေရလျှင်ပြီးရောဆိုပြီး ချော့မလှူခိုင်း ၊ ခြောက်မလှူခိုင်း ၊ မြှောက်မလှူခိုင်းဘူး ။ ကိုယ်တွေ လုပ်နေကြတဲ့အပေါ် ယုံကြည်တဲ့လူတွေ ၊ စေတနာနားလည်တဲ့ လူတွေ လှူမယ် … သဒါ္ဓမပြတ် ၊ စေတနာမရှိတဲ့လူတွေ မလှူချင်လည်း သူ့သဘောနဲ့သူပါပဲ … ငါဦးဆောင်လို့ ထင်ပေါ် ကျော်ကြားရမယ် … ငါဦးဆောင်လို့ ပိုက်ဆံများများ ထည့်ရမယ် … ငါမျက်နှာပန်းလှဖို့ အလှူခံများများ ရှာရမယ်လို့ … လုံးဝ လုံးဝ မမျှော်လင့်ထားလို့ပါပဲ ။ စေတနာအလျှောက် ထည့်ဝင်လာတဲ့အလှူငွေကိုပဲ ရသလောက် ကောက်ခံလှူဒါန်းမှာပါ ။ ထင်ပေါ် ကျော်ကြားမှုအတွက် လုပ်တဲ့ပွဲမျိုး မဟုတ်ပါပဲ စေတနာအရင်းခံပြီး တူတူညီညီ ဆောင်ရွက်ကြတာမို့ မျောက်ပြပြီး ဆန်တောင်းတဲ့ ပွဲမျိုး မဟုတ်တာတော့ သိစေချင်ပါတယ် ။ ကျွန်မက နာမည်ကြီးလေးစားရတဲ့လူမဟုတ်လို့ ဘယ်သူမှမယုံပဲ အလှူမထည့်တာတောင် ၊ တူရာအဖွဲ့ဝင်တွေ ၊ သဒါ္ဓရှင်တွေနဲ့ စုပေါင်းအလှူဖြစ်အောင်လုပ်သွားဦးမှာပါပဲ ။
ကိုဘုန်းကျော်ရေ ရွာထဲမှာစာအတူရေးနေတဲ့ လူအချင်းချင်း ခင်လို့ စကားလက်ဆောင် တစ်ခုတော့ပြောလိုက်ဦးမယ် …. ။ လူ့အသက်ရှင်နေစဉ်နဲ့ သေဆုံးချိန်စပ်ကြား အရေးကြီးတာ နှစ်ခုကတော့ နေတတ်ဖို့နဲ့ သေတတ်ဖို့ဆိုပေမယ့် … အချိန်နေရာ၊ ဒေသနဲ့လိုက်ပြီး အပြောဆိုမှန်ကန်တတ်ဖို့ဆိုတာလည်း လိုပါသေးတယ် ။ သူများကို ပုတ်ခတ်စော်ကားလို့ဝမှ နေသာထိုင်သာရှိတဲ့ဘဝက ငြီးငွေ့စရာကောင်းလွန်းလှပါတယ် ။
ထပ်တလဲလဲပြောခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ထပ်ပြောပါဦးမယ် … ကျွန်မတို့အဖွဲ့တွေ စေတနာကိုအရင်းခံပြီး ယုံကြည်ချက်ရှိရှိစိတ်သန့်သန့်နဲ့ အလှူလုပ်ဖို့တိုင်ပင်ထားတာပါ ။ ဘယ်လိုဖျက်လိုဖျက်ဆီး ဘယ်အမှောင့်ပယောဂကြောင့်မှ နောက်မဆုတ်ပါဘူး ။
ကျွန်မအပါဝင် ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံး နေ့စဉ် အလုပ်ကိုယ်စီနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုနေရသူတွေချည်းပါပဲ ။ အချိန်ပိုလျှံနေလို့ ၊ အိမ်မှာ အားနေလို့ အပျင်းပြေ ကြီးတော်နွားကျောင်းတာလို့တော့ မထင်စေချင်ပါဘူး ။ ကျွန်မတို့ အိတ်စိုက်ပြီး ဖုန်းတွေသုံးကာ တယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ရတယ် ၊ အချိန်လုပြီး အပွိုင့်မန့်တွေလုပ်ကာ ငွေကောက်ခံရတယ် ၊ လိုက်ပါသူများ ဘယ်လိုအဆင်ပြေအောင် ခေါ်ယူရမလဲဆိုတာမျိုးတွေ ညှိပြီးတွေးရတယ် ၊ ဒါတွေအတွက် သီးသန့်အချိန်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ အလုပ်ချိန်မှာ တပြိုင်တည်း လုပ်နေကြရတာ ။ အသက်မွေးအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုအပိုင်းမှာ ချွတ်ချော်မှုတွေ ဖြစ်နိုင်တာလည်း သိတားလို့ ဂရုစိုက်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေကြတယ် … ။
ရွှေတိုက်စိုး ။ ။ သူဆိုလည်း အလှူရှင်ဆက်သွယ်လာတာနဲ့အမျှ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ဖုန်းဆက် အင်ဖောင်းလုပ်ပေးတယ် ။ စာရင်းပေးတယ် ။ အခုမန္တလေးရောက်နေသည့်တိုင်အောင် ဖုန်းဆက်ပြီးတမျိုး ၊ ဂျီတော့ပ်နဲ့တမျိုး ချိတ်ဆက်ပေးတယ် ။ မန္တလေးက အဖွဲ့တွေနဲ့လည်း ဆုံတွေ့ပြီး လှူဖို့တန်းဖို့ နဲ့ နောက်ပိုင်း လုပ်မယ့် ပရဟိတ္တအလုပ်တွေအတွက် ဘယ်လို တွေးထားသလဲဆိုတာသွားရှင်းပြပြီး ပူးပေါင်း ကုသိုလ်ယူနေရှာတယ် ။
ET ။ ။ သဘောင်္သားတွေ ကုန်းပေါ်ရောက်လျှင် ဘာမှ မလုပ်တတ်တော့ဘူးလို့ အတော်များများပြောစမတ်ပြုခဲ့ကြပေမယ့် ကျွန်မတို့ဂေဇက်က ET ကတော့ ၊ သဘောင်္က ခဏပြန်ရော က်တုန်း လက်လှမ်း မှီသမျှ ကုသိုလ်ဝင်ယူနေလေရဲ့ ။ ဘဏ်ကို သွားလှူဖို့ အဆင်မပြေတဲ့လူတွေ ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ချိတ်ဆက်တွေ့ဆုံမယ့်လူတွေ ချိတ်မရတဲ့အခါ အကျိုးဆောင်လုပ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လိုက်လံကောက်ခံပြီး ကုသိုလ်ယူနေပါတယ် ။
AKKO ။ ။ သူလည်းဆေးကျောင်းမှာ လက်ချာချိန်တွေရှိနေပေမယ့် အလှူရှင်လာတဲ့အခါထွက်တွေ့ရတာမျိုး အတန်းချိန်ပြောင်းပြီး ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ဖို့သွားရတာ တမျိုးနဲ့ … တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပေးပြန်တယ် ။
ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်တာ … ထူးထူးခြားခြား ခေတ်ပြောင်းသွားသလား မသိ … ဘဏ်လေးခုကို ပြေးလိုက်ရပါသတဲတဲ့ … မှတ်ပုံတင်ကို ဖင်တပြန်ခေါင်းတပြန်ကြည့်ယုံတင်မကပဲ …. ဝန်ထမ်းကဒ်ပါတောင်းကြည့်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ အဲ့လို အစဉ်လာမရှိတဲ့ ဘဏ်စနစ်မို့… စိတ်တိုခဲ့ပါသတဲ့ … ဒါတောင် အပ်တာလက်မခံလို့ တခြားဘဏ်တွေဆီ ပြေးရပါသေးတယ် … ။ အခုနောက်ပိုင်းအပ်ငွေတွေကို ဒီအတိုင်းလက်မခံတော့ပဲ ဘဏ်မှာ နဂိုက အပ်ခံထားတဲ့ လူနှစ်ယောက်ရဲ့ ထောက်ခံချက်လိုပါတယ်ဆိုလို့ လေ… အရင်ကလို ကိုယ့်မှတ်ပုံတင်ကိုင်ပြီးသွားရင်မရတော့ဘူးတဲ့ …. ။ လူနှစ်ယောက်ရဲ့ ထောက်ခံချက် ရဖို့ အကူညီပတ်တောင်းလိုက်ရပါသေးတယ် ။
ပေါက်ပေပု ။ ။ ပေါက်ပေပုအဖွဲ့သားများကလည်း မန္တလေးဘက်က အလှူရှင်တွေဆီကို နေပူကျဲကျဲမှာတောင် အရောက်သွားပြီး မဖြစ်မနေအလှူခံကောက်ခံပေးကြတယ် ။ ဆိုက်ကယ်နဲ့သွားတော့ ဆီဖိုးကုန် ၊ ချိန်းထားတဲ့နေရာ မရောက်မှာစိုးလို့ ဖုန်းအကြိမ်ကြိမ်ဆက်ပြီး ကွန်ဖမ်းတွေလုပ်နဲ့ … သူတို့လည်း မအားတဲ့ကြားက ပါရမီဖြည့်ကြရရှာတယ် ။
အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးနေသူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ အကျိုးမြတ်မျှောကိုးခြင်းဆိုတာမပါတာကြောင့် ကျွန်မတို့အားလုံး လိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့ ဒီအလှူကို လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ် ။ သဒါ္ဓတရားထက်သန်လှတဲ့ အလှူရှင်တွေကလည်း ယုံယုံကြည်ကြည်ပေးပို့ လှူဒါန်းကြတယ် ။ သူတို့ရဲ့ ဒါနစိတ်ကလေးအတွက် ပီတိဖြစ်ကြရပါတယ် ။
သဂျီးပြောသလို ပြည်ပက လူတွေ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအတွက် အလှူငွေထည့်တာ ငါးခြောက်တပြားတောင် မရောက်တဲ့ ကိစ္စနဲ့တော့ လုံးဝကွာခြားပါတယ် … နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအတွက် ဘယ်သူတွေက လှူပြီး ၊ ဘယ်သူတွေက ပြည်ပကလူတွေကို တာဝန်ယူ ငွေကောက်ခံပေးနေသလဲ အတိကျပါ့ဘလစ်လုပ်ခြင်းမရှိပဲ … မရတော့မှ .. ဟာ တွေ … ဟင်တွေ ဖြစ်ကုန်ကြတာတော့ … သူ့သမိုင်းနဲ့သူပေါ့ … ။
ကျွန်မတို့ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်အလှူလုပ်တာ ပရဟိတ္တသက်သက်ပါပဲ … နိုင်ငံရေး မနွယ်နေသလို ၊ ဘာသာရေးနဲ့လည်း ရောယှက်မနေပါဘူး … ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း nick သုံး စာရေးနေကြရာက ဖုန်းနံပါတ်တေ ွ၊ contact details တွေပါ ပါ့ဘလစ်လုပ်ခဲ့ကြတာပါ ။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် အလှူရှင်တွေ လှူသမျှငွေတွေ ၊ ရည်မှန်းထားတဲ့ နေရာသို့ တကျပ်တပြားကွာဟမှုမရှိစေပဲ အရောက်လှူဒါန်းသွားမယ်ဆိုတာပါပဲ … ။ ပါဝင်ကုသိုလ်ယူ ပေးပို့ လှူဒါန်းကြပါသော အလှူရှင်များကိုလည်း အထူးပင်ကျေးဇူးတင်မိပါတော့တယ် ။
ညီမငယ် ရဲ ့စိတ်ခံစားချက် ကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်
ကုသိုလ်ကောင်းမှု လုပ်တဲ့ကိစ္စမို့၊ ကောင်းမှု အကျိုးပေး ကို
လက်တွေ ့ခံစားရမှာ မလွဲပါပေ လို ့မန် ့လိုက်ပါသည် ။
ပြီးတော့ ဒီထက်ဆိုးတာတွေလည်း ကြုံနိုင်တာဘဲ
အစ်မသာ ဦးဆောင်ပြီးလုပ်သွားမယ်ဆို ကျွန်တော်တို့နောက်က လိုက်ဖို့ဝန်မလေးပါဘူး
လှူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းတော့မတူဘူးပေါ့ ဒါပေမယ့် လုပ်အားလှူဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး
အခုလိုမျိုး တာဝန်ယူပြီး လုပ်ကိုင်နေတာကို တကယ်လေးစားပါတယ်
ကိုဘုန်းကျော်ဆိုတာ ငယ်လားကြီးလား(ကြီးမယ်လို.ထင်ပါတယ်) မသိပေမယ့် အဲလိုပြောတဲ့သူက အဲလိုစိတ်ကူးမျိုးရှိလို.နေမှာပေါ့…
လူငယ်တွေ တက်တက်ကြွကြွ လုပ်နေတာကို အဆိုးမြင်တဲ့ဘက်က တွေးနေတယ်…
ကိုဘုန်းကျော်ကို ဒီပို.စ်ဖတ်ဖြစ်ရင်ပြောချင်တယ်… ကိုဘုန်းကျော်ငယ်ငယ်တုန်းက အခုလို ကိုဘုန်းကျော်သားသမီးအရွယ်တွေ (ကျွန်တော်တို.လုပ်သလို) အလှူလုပ်သလို ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ဘူးလား… ပရဟိတလုပ်ငန်း တစ်ခုတစ်လေများလုပ်ခဲ့ဘူးသလားမေးချင်ပါတယ်….
သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းမစား သရေလိုက်ဖျက်နေတာတော့မကောင်းဘူးထင်တယ်.. မယုံရင်မလှူနဲ.ပေါ့…
ကျွန်တော် စဉ်းစားကြည့်မိတယ် ကိုဘုန်းကျော်ခင်ဗျာ.. ဗုဒဘာသာ ရောဟုတ်ရဲ.လားလို.ပါ..
etone ရေ ကျမတို့ကပရဟိတလုပ်ချင်စိတ်ရှိပေမယ့်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးမလုပ်နိုင်တော့လဲ
etone တို့လို ဦးစီးဦးဆောင်ပြုပြီးလုပ်တဲ့သူတွေကိုဘဲအားကိုးရတာပါ
ဟုတ်တယ် အန်တီ အိတုံ။ အန်တီ့ ကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ မထားပါနဲ့ သူက လေနဲ့ ပြောရင် လေထဲပျောက်တယ် ထင်နေပေမယ့်။ ကိုယ်တွေက ရင်ဘတ် နဲ့ ရင်းထားတာမို့ စကားတိုင်း ကို လိုက်ခံစားနေရင် ကိုယ်ပဲ ပင်ပန်းပါလိမ့်မယ်။ အန်တီ အိတုံ ကို ဒီ မန့် လေးနဲ့ အားပေးပါတယ် ဗျာ။
ရွာဆိုတာအုပ်ချုပ်သူရှိမယ်။ ဘုန်းကြီးရဟန်းရှိမယ်။ ပြည်နေပြည်ထိုင်ရွာခံရှိမယ်။ ဧည့်သည်ရှိမယ်။ ပရဟိတလုပ်မဲ့သူရှိမယ်။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အများအကျိုးဆောင်သူရှိမယ်။ ကိုယ်တိုင်ခေါင်းမဆောင်ပေမဲ့အများနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်သူရှိမယ်။ လူဆိုးလူမိုက် ရှိမယ်။ ရှေ့ကလဲမသွား၊ နောက်ကလဲမလိုက်ကန့်လန့်တိုက်မဲ့သူရှိမယ်။ ဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှမြို့တခု၊ ရွာတခုပီသမှာပါ။ ဒီမန်းဂေဇက်မှာလဲဒီလိုအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်၊ ရွာပီသအောင် ကိုဘုန်းကျော် ကလူမိုက်လုပ်ပြီးကူညီတယ်လို့သဘောထားလိုက်ပါညီမလေး။ ကိုယ့်ကုသိုလ် ကိုအောင်မြင်အောင်၊သန့် ရှင်းအောင်သူ့ကိုလျစ်လျှုရှု့လိုက်ကြရအောင်။ ရွာပီသအောင်ကူညီတယ်လို့သဘောထားပြီးလွှတ် ထားလိုက်ပါ။
etone ရေ …. ကိုဘုန်းကျော်ဆိုတဲ့ သူဘာပဲပြောပြောပါ
သူကဒီအလှူမှာ ပါဝင်ချင်တယ်လို့လဲပြောသေးတယ် အခုလိုလဲ
အလှူကို ဦးဆောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ သူတွေ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင်လဲ
လုပ်သေးတယ် သူ့စိတ်ထဲ ဘယ်လိုရှိမယ်မှန်း မသိပင်မယ့် သူ့ကိုစိတ်ထဲ ထားမနေပါနဲ့
သူဘာပဲပြောပြော ပါဝင်လှူဒါန်းသူအားလုံးကလည်း ယုံကြည်ကြပါတယ်
ဒီတော့ ဒီအလှူလေးက ဖြစ်မြောက်မှာပါ .. ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲ
ဒီလို စုပေါင်းပြီးလှူရတဲ့ ပရဟိတအလှူမျိုးတွေ လုပ်ဖိုလဲ့ အားပေးနေပါတယ်နော် ….
ပရဟိတ စုပေါင်းအလှူတစ်ခုဖြစ်ဖို့ လှူလိုက်ရတဲ့လူတွေ အတွက်က ကုသိုလ်ရေးရာ
ညီမတို့လို ပရဟိတ အလှူဖြစ်မြောက်ဘို့ အတွက် ဦးဆောင်ရတဲ့သူတွေမှာ
အရမ်း ပင်ပမ်းမှန်းသိပါတယ် / တော်ရုံလူတွေတောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး
လောကကြီးမှာ အဖျက်ဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေတက်တော့
ဆို တဲ့ ကဗျာလေလိုပဲ
တို့တွေရဲ့ အလှူလေး အောင်မြင်အောင် အားတင်းထားလို့
အဖျက်ဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ ဝင်တတ်တယ် ဆိုတာ ဒါမျိုးပဲ နေပါလိမ့်မယ်။
ကိုဖုန်းကျော် အတွက် ဆိုရင်တော့ မယုံရင် စောင့်ကြည့်နေပေးပါ.. တကယ် လုပ်ပြီးမှ ယုံပါလို့ပဲ ပြောချင်တယ်။
အလှူရှင်များရဲ့ အလှူစာရင်း ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီရွာကြီးက ဘယ်လောက် ယုံကြည်ချက်ပေးကြလဲ ဆိုတာ အသိသာကြီးပါပဲ။
အခုပဲ ဟို ပိုစ်ထဲမှာ သွားကြည့်လိုက်တာ.. နည်းတာ မဟုတ်ဘူး ပရိတ်သတ်တွေ တော်တော် ကို အားပေးထားကြတာ အနီတွေ အစိမ်းတွေ တခါမှ အဲလောက် ဂဏန်းကြီးကြီး မမြင်ဘူးဘူး။
နောက်နောင်များမှာလည်း ဒုတိယအကြိမ် တတိယအကြိမ်များတင်မက.. နောက်ပိုင်း ဆက်တိုက် အကြိမ်ရေ များများ လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြတာပေါ့.. အနည်းဆုံး ၁နှစ်ကို တကြိမ် လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြမယ်။
အားတင်းထားပါ.. မလျော့သော ဇွဲနဲ့ ဆက်သွားကြရအောင်..
ခွေးဟောင်တိုင်း ထ ကြည့်ရတာ အိပ်ရေးပျက်ပါတယ် ညီမရယ်..
ဒီလို ပိုစ်ရေးလိုက်တာတော့ အလွန် ကောင်းတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဘယ်သူတွေ ဘာပဲပြောပြော ပို့စ်ခေါင်းစဉ်လေးကိုတော့ ခိုက်သွားပြီ ခစ်ခစ်….
ပထမပို့စ်ထဲက ဖုန်းဆက်ပြီး လှူမလို့ မအားလို့ မဆက်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတာ
ခုပို့စ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်က မနေနိုင်အောင်ကို စွဲဆောင်လိုက်ပြီ ဟိဟိ
အိတုန်အတွက် မနိုရေးပေးတဲ့ ကဗျာလေးကို အစအဆုံး ဖြည့်စွက်ပေးလိုက်တယ်နော်
* ပြစ်မရှိ ပြစ်ရှာ *
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကိုဘုန်းကျော်လမ်းလျှောက်ရင် ဂဏာန်းသွား သွားတာလားဟင်…… မတိလို့ မေးတာနော်
ခင်ဗျားတို့တွေသာ ဆပ်ပြာသှ်လင်ပျောက်သလို ပျာယာခတ်နေဂျဒါ
အကြောင်းသိချင်ရင် ဘုန်းကျော်ရဲ့ဆိုဒ်ကို ဝင်ကြည့်ကြပေါ့
ဘာတဲ့ လိင်တူချစ်သူ နိုင်ငံရေးသမားဆိုလား အဲဒါကြီးတွေ့တာနဲ့
ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါဗျာ သူငယ်ငယ်အမိဝမ်းတွင်းက ထွက်တုံးက ဆရာဝန်က ချက်ကြော နဲ့ ရှက်ကြော မှားဖြတ်မိလို့နေပါလိမ့်မယ်(ဒါကြောင် အရှက်တရားဆိုတာကို မသိလို့ပြောချင်တာပြောလို့ရတယ် ပြောတိုင်းလဲတင့်တယ်တယ် ထင်နေပုံရပါတယ်)
လိပ်ဝင်နေလို ့..လိပ်ထွက်အောင် ကုန်းအော်နေတာ..
အိတ်ဖွင့်ပြီး ပေးလို့ဖတ်သွားပါတယ် ။ နောက်တစ်ခါ လည်း အားလုံး ဖတ်လို ့ရအောင် အိတ် ပိတ်စာ တွေ မပေးပါနဲ ့နော်။
ခွေးလွှတ်လိုက်ပါ ညီမငယ်အိတုံ(စောရီး ရခိုင်သံနဲနဲဝဲသွားလို့)…ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါကွယ်…အကိုကတော့သူကို ပိုပြီးတော့တောင်ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်…ဘာကြောင်လဲဆိုတော့ သူကြောင့် ဂေဇက်ညီအကိုမောင်နှတွေပိုပြီးစည်းလုံးလာတယ်၊ပိုပြီးယုံကြည်မူတွေတိုးလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်..ဘယ်အလုပ်မဆို အဖျက်ဆိုတာရှိတယ် အဲတာကို ကောင်းမွန်စွာကျော်လွှားနိုင်ရင် အောင်မြင်မူကိုရတာပါပဲ…ဆက်လုပ်ညီမလေး…တတ်နိုင်တဲ့သူတွေ သဘာဝကျကျတွေးပြီး လက်တွေ့ကျကျလုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေပဲ…နောက်ထပ်စုပေါင်းပြီးလုပ်ချင်တာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်…
လိပ် နသိုး ဂနန်း ပုတ်သင် ဆိုပြီး အမ်တင်အေးကလုပ်လိုက်တာလုူတိုင်ုးပါးစပ်ဖျား
ဟယ် မမအိတုံရေ။အဲ ဘုန်းကျော်က ကုန်းအော်ရုံဘယ်ဟုတ်မလဲ ဖင်ပါပေါင် အဲလေ ဖင်ပါပြောင်နေတာ။
ဘုန်းကျော် တင်ထားတဲ့ စာတွေကို သေသေချာချာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ …
ကျပ်ပြည့်ပုံ သိပ်မပေါ်ဘူး … မစားဘူးတာတွေစားပြီး … မနေဘူးတဲ့နေရာမှာနေလိုက်ရတော့
ဘဝင်လေဟပ်ပြီးရူးသွားပုံရတယ် … အရူးဆိုတာ .. ပြောချင်ရာပြော ရေးချင်ရာရေး နေမှာဘဲ ..
ခွင့်လွှတ်လိုက်ကြပါ … သနားစရာကောင်းပါတယ် …
အလှူမှာ ကျွန်တော်လည်း တတပ်တအား
သမီး အိတုံရေ –
အရီးလတ် လဲ ပြည်တော်ပြန်ရောက်ချိန် ဆက်သွယ်ဖို့ အိတုံ ရဲ့ နံပါတ်ကို ယူထားပါတယ်။
နီးတဲ့အချိန် သူကြီးထံမှ အီးမေး တောင်းပြီးလဲ ကြိုစာပို့ထားပါ့မယ်။
ဘီလူးကြီး ခင်ဗျား ..
ကျပ်ပြည့်ပုံ သိပ်မပေါ်ဘူး …
အိုင်စီ ပွဲသွားကြည့်ရင် ပရိသတ်တွေကအော်ကြတယ်
လေးဖြူ လေးဖြူ လေးဖြူ လေးဖြူ
မန်းဂဇက် ကို ဝင်ကြည့်တော့ ရွာသူ ရွာသားတွေက အော်ကြတယ်